बोसो लागेर तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए हरेक दिन यसरी पिउनुहोस् – ल्वांग-पानी (तरिका सहित हेर्नुहोस् ) – yuwa Awaj
बोसो लागेर तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए हरेक दिन यसरी पिउनुहोस् – ल्वांग-पानी (तरिका सहित हेर्नुहोस् )
कार्तिक २०, २०७७ बिहिबार 4
प्राय: ल्वांगको प्रयोग खाना स्वादिष्ट बनाउन गरिन्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ कि ल्वांगले खाना स्वादिष्ट बनाउनुको साथै मोटोपना घटाउन पनि मद्दत गर्छ ।
यसले शरीरमा रहेको बोसो पगाल्ने काम गर्छ । यसमा प्रोटीन, आइरन, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम र हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले मोटोपना कम गर्नुको साथै अरु पनि थुप्रै समस्याबाट छुटकारा दिन मद्दत गर्छ ।
मोटोपना घटाउने तरिका
ल्वांगले शरीरको मेटाबोलिजमलाई उत्तेजित गर्दछ, जसले वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा एन्टीकोलेस्टेरिक र एन्टी लिपिड हुन्छ । यसलाई दालचिनी, मरिच र जीराको साथ मिलाएर सेवन गर्नाले यसले शरीर को मेटाबोलिक रेट बढाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै, ल्वांगले मधुमेह पनि नियन्त्रण गर्छ ।
५० ग्राम ल्वांग
५० ग्राम दालचिनी
५० ग्राम जीरा
ल्वांग पानी तयार पार्ने तरिका
दालचिनी र जीरा मिसाएर यसलाई केहि समय भुट्नुहोस् । त्यसपछि मसिलो हुनेगरी पिस्नुहोस् । पिसेर धुलो पाउडर हावा नछिर्ने भाडोमा राख्नु पर्छ ।
एक चम्चा पाउडर एक गिलास पानीमा मिलाएर उमाल्नुहोस् र केहि समय सेलाउन राख्नुहोस् । त्यसपछि एक चम्चा मह मिलाउनुहोस् र पिउनुहोस् । यसरी दैनिक बिहान खाली पेटमा ल्वांग पानीको सेवन गर्नाले शरीर स्वस्थ र निरोगी रहन्छ ।
महले दिलाउँछ यस्ता समस्या देखि छुटकारा !
मह एक प्राकृतिक औषधि मानिन्छ । धेरै समय अघिदेखि नै बिमारी वा घाउको उपचार गर्न महको प्रयोग गरिँदै आएको छ । यो स्वादिष्ट र गुणकारी पदार्थ हाम्रो स्वास्थको लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।
पेट सम्बन्धि समस्या
महको सेवनले पेटको छालामा हुने समस्याको तनाव लिनुपर्दैन। एक सर्वेक्षण अनुसार, महमा पाइने एन्टिबायोटिकहरूले पेट सम्बन्धी समस्याहरूलाई कम गर्दछ।
महमा धेरै प्रकारका रोगबाट मुक्ति दिन सक्ने क्षमता हुन्छ | महको सेवनले हाम्रो शरिरमा उर्जा बढ्छ |
घाँटी दुख्ने समस्या
महमा एन्टिबायोटिक गुणहरू हुन्छन्। जसले घाँटीमा हुने कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हटाउँछ। यसले घाँटी दुख्ने र खोकीको कारण उत्पन्न हुने दुखाइमा पनि राहत प्रदान गर्दछ।
महमा त्यस्ता तत्त्वहरू पाइन्छ जुन मधुमेह पीडितहरूका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। नियमित रूपमा मह खाँदा रगतमा उच्च चिनीको मात्रा पनि नियन्त्रण हुन्छ |
महले अनुहारको लागि एक प्राकृतिक मोइश्चराइजरको रूपमा काम गर्छ। यसले तपाईंको छालाको चाउरीपना हटाउन मद्दत गर्दछ र यसलाई सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
वजन घटाउन मद्दत गर्छ
महमा भिटामिन ए, बी र सी पाइन्छ। यसमा फ्याट हुँदैन। त्यसैले यसले तपाईंलाई तपाईंको वजन घटाउन सहयोग गर्दछ। यसले तपाईंको शरीरबाट अतिरिक्त फ्याट पनि हटाउँछ।
Posted in स्वास्थ्य/जीवनशैली
Prevहाम्रै घर अगाडी रहेको यो झाडीको महत्वबारे कसैलाई थाहा छैन। यति धेरै रोगहरुको लागि फाइदाजनक हुन्छ…हेर्नुहोस् ।
Nextप्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डको प्रस्ताव बादलद्वारा अस्वीकार !
मलेसियामा कामदार लैजाने योजना अनिश्‍चित…हेर्नुहोस् ।
अधिकृतबाट राजीनामा दिएर प्रहरीका कुकुर स्याहार्न थालिन् देउती गुरुङ…हेर्नुहोस् ।
नेता बस्नेत भन्नुहुन्छ : कम्युनिस्टहरू कु’टाकुट गरेका छन्, टाउको फु’ट्यो भने उपचार गर्न कांग्रेसले र’गत दिन्छ…हेर्नुहोस् ।
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1516)
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1365)
गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (713)
असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (547)
मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (424)
के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (390)
सर्वोच्चले भन्यो, ‘चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’
१.	आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1516)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1365)
३.	गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (713)
४.	असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (547)
५.	मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (424)
६.	के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (390)